यी ४ राशिको दिमाग कम्प्यूटर भन्दा पनि तेज चल्छ, तपाई पनि पर्नुभयो की ? – Khabaarpati
यी ४ राशिको दिमाग कम्प्यूटर भन्दा पनि तेज चल्छ, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
October 19, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on यी ४ राशिको दिमाग कम्प्यूटर भन्दा पनि तेज चल्छ, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
काठमाडौँ । विश्वमा रहेका व्यक्तिहरुको सबैको फरक-फरक भाग्य साथै व्यवहार हुने गर्छ। साथै हरेक व्यक्तिको क्षमता पनि फरकनै हुने गर्छ।कोहि धेरै प्रभावित पार्न सक्ने बौद्धिक क्षमता भएका हुने गर्छन् भने केहि चाहिं केहि कम बौद्धिकटा भएका पनि हुने गर्छन्।ज्योतिष शास्त्र अनुसार हरेक राशिको फरक व्यवहार साथै भाग्य हुने गर्छ। आज हामी यस लेखमा धेरै तेज दिमाख हुने राशिहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछौ।
वृश्चिक राशि-ज्योतिषको अनुसार, वृश्चिक राशि हुनेहरु सबै भन्दा बुद्धिमान रहने गर्छन्। यस राशि हुनेहरु अन्य व्यक्तिहरुले भन्दा फरक ढङ्गबाट सोच्ने गर्छन्।
यस राशिका मानिसहरु अन्य व्यक्तिको सोच अन्त्य भएको ठाउँ देखि सोच्ने गर्छन्। साथै यस राशिहुनेहरुको परिकल्पना पनि अन्य भन्दा धेरैनै फरक हुने गर्छ।
मेष राशि-बुद्धिमानको कुरा गर्नु पर्दा मेष राशि भएका व्यक्तिहरु पनि धेरै अगाडी हुने गर्छन्। यस राशि हुनेहरु अन्य भन्दा धेरै फरक योजना बनाउन खप्पिस हुने गर्छन्। साथै आफुलाई हार मन नपर्ने हुँदा यस राशि हुनेहरु हरेक काममा आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्छन्।
धनु राशि-यस राशि भएका व्यक्तिहरु व्यापारमा आफ्नो दिमाग धेरै लगाउने गर्छन् भने आफ्नो दिमागको प्रयोग गरेर अरुलाई सजिलै आकर्षित गर्ने क्षमता पनि राख्ने गर्छन्।
यति मात्र नभई अरुको मनको कुरा थाहा पाउन पनि धनु राशिक मानिसहरु धेरै खप्पिस हुने गर्छन्। सठीक निर्णय लिनु पनि धनु राशिको खासियत हो।
वृष राशि-प्राय शान्त रहन मन पराउने यस राशिका मानिसहरु आफ्नो बौद्धिकता अरुलाई खासै देखाउन मन नपराउने गर्छन्। साथै जहिले पनि सोच सकारात्मक राख्ने गर्छन्।अरुको मनको कुरा समेत थाहा पाउने क्षमता भएका यस राशिका व्यक्तिहरु अध्ययनमा पनि धेरै अगाडी नै हुने गर्छन्
कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे कि मन पराउँदिन भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ ??? यी कुरा विचार गर्नुस्
जब आफ्नो बहिनीलाई बचाउन जब ग्राहक बनेर भाई पुगे …
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, फाल्गुन १४ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल February 26, 2021
बखत र प्रतिभा एकै साथ मिडियामा -खुल्यो नयाँ रहस्य ! (भिडियो हेर्नुस्) February 25, 2021
मोरङमा प्रविनले न्याय नपाउँदै फेरी अर्को घटनामा आन्दोलन सुरु, नेताको घरमा छोरा मा रिँदा छानविन भएन भन्दै स्थानियले घेरे प्रहरी कार्यालय (भिडियो हेर्नुस्) February 25, 2021
जय नागदेवता: भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दुई मुखे नाग, February 25, 2021
दाजुको ह त्या पछि न्यायका लागि लडेकी बहिनी सदिक्षाको समर्थन गर्दै मनोज गजुरेलले लेखे मन छुने स्टाटस February 25, 2021